लागूऔषध लतमा डाक्टर
‘ड्रग्स’ लिन हिडेका याेनेश त्रिशुलीमा मृत भेटिएपछि मनिपालका डाक्टर खाेरमा
यसअघि पक्राउ परेका सञ्जयले दिएको बयानकै आधारमा डा. राजवलाई पक्राउ गरिएको हो । अस्पताल र कलेजभित्रबाट पक्राउ गर्न नमिल्ने हुनाले उनलाई समात्न केही दिन लागेको प्रहरीको भनाइ छ । लागुऔषध कारोबार आरोपमा मनिपाल अस्पतालका डा. राजव रानामगरलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्याङ्जा, वालिङ–३ का डा. मगरलाई प्रहरीले आइतबार दीपस्थित कलेज बाहिरबाट पक्राउ गरेको हो ।
पोखराका २ युवालाई सुनौलीमा लागुऔषध लिन पठाएको आरोप उनलाई लागेको थियो । पोखरा, बगालेटोलका सञ्जय गुरुङ र पोखरा–१२, शीतलदेवीका योनेश गुरुङलाई लागुऔषध लिन पठाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
आफूहरु लागुऔषध लिन गएको सञ्जयले स्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ‘सञ्जयले दिएको बयानकै आधारमा डाक्टर राजवलाई पक्राउ गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अस्पताल र कलेजभित्रबाट पक्राउ गर्न नमिल्ने हुनाले उनलाई समात्न केही दिन लाग्यो ।’ डा. राजवले लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेको उनका साथीभाइ सबैलाई थाहा थियो । डा. राजव एमबिबिएस सकेर मनिपालमा एमडी गर्दै छन् ।
योनेश मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानकै क्रममा कास्की प्रहरीले पोखरा–३ का रोहित प्रजू र सञ्जयलाई असार ३ गते पक्राउ गरेको थियो । तर रोहितलाई असार ४ गते छाडिएको छ भने सञ्जयलाई थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरी अनुसन्धानमा राखिएको छ । प्रहरीका अनुसार ४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता भएको हुनाले आपसमा राम्रो चिनजान थियो ।
‘घटना कति गतेको हो भन्ने अझै खुलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘डाक्टर राजव बल्ल पक्राउ परेका छन् अब १, २ दिनमा खुल्ला ।’ घटना करिब २ साताअघिको हुनुपर्ने प्रहरीको अनुमान छ । योनेश र सञ्जयसँगै पोखराबाट हिँडेका थिए । तर मुग्लिङमा पुगेपछि सुनौली जाने बसमा चढेको केही बेरमा योनेश हराएको सञ्जयले प्रारम्भिक बयानमा बताएका थिए । हराएको ५ दिन बितिसक्दा पनि उनी नआएपछि परिवारले कास्की प्रहरीमा घटना विवरणसहित खोजीदिन आग्रह गरेको थियो ।
सञ्जयको खोजीमा निक्लिएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले असार ३ गते रोहित र सञ्जयलाई लेकसाइडको होटलबाट लागुऔषधसहित पक्राउ ग¥यो । उनीहरुको साथमा लागुऔषध ३४ थान सेट फेला परेको थियो । मुग्लिङमा घटना भएको हुनाले कास्की प्रहरीले चितवन प्रहरीलाई योनेशको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
असार ६ गते योनशको शव मुग्लिङनजिकै त्रिशूली नदीमा फेला परेको थियो । सड्न थालिसकेको हुनाले शवको प्रकृति हेरर हत्या हो या होइन भन्ने प्रहरीले ठम्याउन सकेन । चितवन प्रहरीले शवको पोस्टमार्टम र भिसेरा रिपोर्टका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका इन्स्पेक्टर अन्जना श्रेष्ठले थप अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पोस्टमार्टम र भिसेरा रिपोर्टपछि आएको छैन । केही दिन अझै लाग्छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १२, २०७४ १२:५०:३४